Ihe eji emepụta ihe Apple Watch si Monowear | Esi m mac
Design eriri maka Apple Watch si Monowear
O doro anya na ụwa nke Apple Watch O nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye ma ọ bụ ụbọchị ahụ kwa ụbọchị ka anyị na-ahụ ndị nrụpụta ọhụụ na-anọ na nzọ na ngwa ọhụrụ maka obere maka Cupertino, dị oké ọnụ ahịa Apple Watch. N'okwu a anyị na-egosi gị nhọrọ ọhụrụ na eriri ndị mmebe, oge a site na Monowear.
Ndị a bụ eriri emere ọ bụghị naanị nke akpụkpọ anụ kamakwa ejirila usoro mmechi emebe na mgbakwunye na eburu echiche nke Apple's Milanese strap to the Nylon material.
uwe akwa Ha gbagoro na eriri eriri ihe eji emepụta ihe maka Apple Watch na site na ihe anyị nwere ike ịhụ, echiche ha na-enye dị ezigbo mma. Ha na-eji nchara, curo na naịlọn na seramiiki Nlụpụta siri ike eriri na-emegharị ka oge.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo ndị so isiokwu ahụ, echiche nke eriri naịlọn dị ka nke Appleese nke Milanese, mana mmechi ahụ bụ site n'ụgbọ mmiri kama ịnata igwe. N'ihe banyere eriri ígwè maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ, Ejirila ngwakọta nke ígwè na seramiiki nke na-enye ya ụdị dị iche na enweghị nlebara anya.
O doro anya na ọ bụ ezigbo nhọrọ maka eriri na ọnụahịa, ma eleghị anya ọ dị elu, ma ọ bụrụ na anyị echebara ndị Apple tinyeworo aka na eriri igwe ya, anyị ga-ahụ na itinye ego ga-adị obere. Can nwere ike ịhụkwu ụdị ndị a eriri na webụ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Design eriri maka Apple Watch si Monowear
Ihe ohuru Porsche 911 GT3 ga akwado Apple CarPlay
Ndị na-ahụ maka akụ na ụba na-adọ aka na ntị banyere mmụba nke ọnụahịa ngwaahịa Apple n'ihi usoro US.